搜索 Ajajjita 的结果：
[na+bhujjita. bhuñjiyate jajjitaṃ，bhujjita-hū bha- ja-pruç u a-pruyuea jajjita-hu ma，ṭī akraṃ. ī sī，i-mūnitea ]ajaddhuka]hu rhi，sakkatanitea ada tipaso jaddhisaddāahoso pāḷinitea jadvusaddāahohu kraṃeiea. pā，2，4，36-. aṃ，3，1va9 khyenitea ]jaddhūti asanaṃ=bhattabhuñjanaṃ]hu rhi. ta ajajjika-hu kraṃyuea jaddhimha jajji-lā natthi jajji etassāti ajajjikaṃhu vipru acāmasoaarara rhi.]
[န+ဘုဇ္ဇိတ။ ဘုဉ္ဇိယတေ ဇဇ္ဇိတံ၊ ဘုဇ္ဇိတ-ဟူလိုလျက် ဘ-ကို ဇ-ပြု，ဥကို အ-ပြု၍ ဇဇ္ဇိတ-ပြီးသည်ဟု မ၊ဋီ အလိုကြံ။ ဤပုဒ်သည် သီ၊ဣ-မူတို့၌ ＇အဇဒ္ဓုက＇ဟု ရှိသည်၊ သက္ကတ၌ အဒဓာတ် တိပစ္စည်းဖြင့်ပြီးသော ဇဒ္ဓိသဒ္ဒါသည် စားခြင်းအနက်ကို ဟောသောကြောင့် ပါဠိ၌ ဇဒွုသဒ္ဒါလည်း စားခြင်းအနက်ကို ဟောသည်ဟု ကြံသင့်၏။ ပါ၊၂၊၄၊၃၆-ကြည့်။ အံ၊၃၊၁ဝ၉ အောက်ချေ၌လည်း ＇ဇဒ္ဓူတိ အသနံ=ဘတ္တဘုဉ္ဇနံ＇ဟု မှတ်ချက် ထိုးထားလျက် ရှိသည်။ တနည်းလည်း အဇဇ္ဇိက-ဟု ပါဌ်ကြံ၍ ဇဒ္ဓိမှ ဇဇ္ဇိ-ဖြစ်လာပြီး နတ္ထိ ဇဇ္ဇိ ဧတဿာတိ အဇဇ္ဇိကံဟု ဝိဂြိုဟ်ပြု အစာမစားသော အကျင့်ကို အရကောက်ရလျှင်လည်း သင့်မြတ်ဖွယ်ရှိသည်။]
မစားခြင်း။ အစာမစားဘဲ-နေခြင်း-ကျင့်ခြင်း။ အဇဒ္ဓုမာရီ，အဇေဋ္ဌမရဏ，အဇုဋ္ဌမာရီ-တို့လည်းကြည့်။
与 Ajajjita 相似的巴利词：